Ngaba umntu unokuba ngumthengisi we-Forex ophumelelayo? | FXCC
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Ngaba umntu unokuba ngumthengisi we-Forex ophumelelayo?
Yona nqaku yokugqibela esiyathanda ukuyigxininisa kuyo, njengoko ihamba ngokubhekiselele kubulumko obunamkelekileyo ukuba kukho enye ingcali engabonakaliyo, ekhethekileyo ekubandakanyekeni kwintengiso, xa inyaniso kukuba i-talente esinokuyibambisana nayo yimpumelelo yoshishino ayikho ' T ngokwenene italente. Abaninzi bethu baya kukhubeka kwizorhwebo ngengozi, kunokuba baqulunqe. Njengomzekelo, kukho ukuhlaselwa okuphawulekayo kwintengiso ye-forex, ukususela ekubeni iirhafu zentsholongwane yongxamiseko yaba yinto evamile, ukusuka kwi-2008 phambili.
Sikhohliswa kwigumbi lokuthengisa eliqhelekileyo kunye nemifanekiso yokuthengisa engezantsi ezithunyelwa ngamajelo aqhelekileyo malunga nokuhweba; abantu abancinci, ii-sleeves eziqhotyoshelwe, iifowuni ezimbini zomhlaba (enye iphumla kwindlebe nganye), njengoko ihlawula "ukuthenga, ukuthengisa" imiyalelo kubalingani babo. Loo mfanekiso usemyuziyamu yokuthabatha ubugcisa, ngenxa yokuba yincinci encinane yezoshishino, nangaliphi na uhlobo, eqhutyelwa ngale ndlela. I talente yangempela ngoku isekho zobunjineli bezezimali, njengoko kungekho zindlela ezizenzekelayo zokuthengisa iimarike eziza kubonelela nayiphi na iziphumo ezingapheliyo zonyaka, apho singakwazi ukwakha ingeniso nekamva.
Ngaphezulu kwe-80% ye-Wall Street ukuthengiswa kwamashishini okwenziwa kwamashishini ngoku iqhutywe yi-algorithms, kwaye inxenye enkulu yaleyo iqhutyelwa kwindawo ebizwa ngokuba yi-HFT, ukuhweba kwexesha eliphezulu, amanani afanayo ngokumalunga nokuthengisa kwangaphambili. Ukuba kukho nayiphi na italente echaphazelekayo ekuthengiseni ngayo iimfuno ze-maths kunye ne-physics ezichonga kwaye zenze iiprogram zokurhweba, akusiyo umthengisi onobumba onokuzingela ukuba i-EUR / i-USD ingakhula, ngokusekelwe kwimizekelo yezobugcisa kunye neendaba ezizayo zekhalenda.
Ngoko, njengoko siphindela emuva kumbuzo wokuqala; "Ngaba nabani na oba ngumthengisi ophumelelayo?" Ewe mpendulo, ukuba ngaba bafumana ixesha. Ixesha mhlawumbi (ngaphandle kwenkcazo ecacileyo yemali), eyona nto ibaluleke kakhulu yinto ebangela ukuba siphumelele.
Njengoko kuye kwaxutyushwa ngamaxesha amaninzi, awudingi imali eninzi ukuze uqale ukurhweba, eqinisweni (okokuqala) kuyona nto ibhetele xa ungathembisi imali eninzi kwi-akhawunti yakho yokuqala. Ngeentsuku zokuqala sifuna ukubona ukubuya, ukubuyela okuthobekileyo kwi-investments yethu (ROI) ngaphambi kokunyuka. Ukuba singenza iprojekthi ye-1% ngeveki, kwi-50% ye-ROI ngonyaka ekukhuleni komnyaka kwi-akhawunti yethu encinci yokuthengisa, enokuvulwa njengento encinane njenge-$ 500, ngoku sinokuqiniseka ukuba sibeka imali engakumbi kwi-akhawunti yethu kwaye sithengisa maqashiso.
Nangona kunjalo, ukuba asinakho ixesha elaneleyo lokungcebeleka, siya kuphucula njani izakhono eziyimfuneko ukuba zibe ngabahwebi abaphumelelayo? Ngaba ufumana ixesha lokurhweba ngokwenene ikhono elingaphantsi kokuphuhliswa nokungaziwa? Mhlawumbi kunjalo. Kudinga ezinye zezakhono zobomi ezisisiseko esivame ukuzinyamekela, ezifana; intlangano, ukuqeqeshwa, ukuphindaphinda, izakhono esingaze sizibandakanye kunye nezorhwebo xa siqala ukuzifumana njengethuba.